Prosecute Security Forces For Violence, Rape, HRW Tells Zimbabwe - allAfrica.com
The Zimbabwean authorities should arrest and prosecute those responsible for abuses and send a strong message that crimes by the security forces won't be tolerated, a Human Rights Watch report says, accusing the country's security forces of using excessive lethal force to crush nationwide protests which were triggered by a sharp hike in fuel prices in January. The report comes as South African President Cyril Ramaphosa is in Zimbabwe for the binational commission which seeks to strengthen cooperation between Pretoria and Harare.
HRW, 12 March 2019
Violence and Rape by Zimbabwe Gov't Forces After Protests
Zimbabwe security forces used excessive lethal force to crush nationwide protests in mid-January 2019, Human Rights Watch said today. President ... see more »
A coalition of women rights groups based in Zimbabwe says that a number of sex workers were raped by members of the country's security forces who were deployed to quell violent… Read more »
The violent clampdown on protesters by soldiers and the police has left deep scars and trauma on children and women who were beaten up, raped or were forced to watch as their… Read more »
The widespread reports of rape and unprovoked assault of citizens including women and children are very disturbing. Read more »
Zimbabwe Independent, 18 January 2019
At a private hospital in Harare on Wednesday, a mother lay between her two children, all writhing in pain from injuries sustained when masked soldiers attacked their home Boko… Read more »
Man openly whipped by a soldier during the violent protests.
With tensions rising as Zimbabwe's economic problems hurtle towards a tipping point, the police has stepped up its arrests of opposition officials and civil society leaders accused ... Read more »